အသက် (၆) နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ် ကလေးငယ်အတွက် အမှတ်တရ စကားဆိုခဲ့တဲ့ လိဒ်ယူနိုက်တက် | FOX Sports Myanmar
အသက် (၆) နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ် ကလေးငယ်အတွက် အမှတ်တရ စကားဆိုခဲ့တဲ့ လိဒ်ယူနိုက်တက်
လိဒ်ယူနိုက်တက်အသင်း ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တိုဘီနိုင်း ဆိုတဲ့ အသက် (၆) နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ကတော့ ကင်ဆာဝေဒနာကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ စပါးအသင်းကသူ့အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
တိုဘီဟာ ကင်ဆာဝေဒနာကို (၂) နှစ်ခွဲကြာခံစားခဲ့ရပြီး သူကွယ်လွန်ခဲ့ရတာကလည်း ဒီ brain tumour ဝေဒနာကြောင့်ပဲလို့ တိုဘီရဲ့ မိသားစုက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇန်န၀ါရီလ (၁၃) ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ တိုဘီရဲ့ အကြောင်းကို သူ့မိသားစုက တွစ်တာအကောင့်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီး သူရဲ့ကောင်းကတော့ မေမေ နဲ့ ဖေဖေ ရဲ့ လက်မောင်းပေါ်မှာ လဲလျောင်းရင်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီလို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
— Toby Nye (@TobyNye4) January 13, 2019
Heartbroken. The memories will live forever. We love you Toby x pic.twitter.com/hj79Q1Kvgm
အခုလို တိုဘီကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ သတင်းကြားကြားချင်းမှာပဲ လိဒ်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ အန်ဒရီယာ ရက်ဒ်ဒရီဇက်နီက သူ့ရဲ့ တွစ်တာမှာ “ ငြိမ်းချမ်းစွာသွားပါတော့ အိန်ဂျယ်လေး တိုဘီရေ Elland Road မှာအတူရှိခဲ့တဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအမှတ်တရတွေကို နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲအမှတ်တရရှိနေမှာပါ။ငါတို့မင်းကိုချစ်ပါတယ်။မင်းနဲ့စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ မိသားစုကိုလည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်” လို့ ချက်ခြင်းပဲရေးသားဖော်ပြခဲ့သလို ကလပ်အသင်းအနေနဲ့လည်း “ နှလုံးသားတွေ ကွဲကြေရပါတယ်။ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေက မေ့မရနိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေအဖြစ်ရှိနေမှာပါ။ငါတို့မင်းကိုချစ်ပါတယ် တိုဘီ” လို့ တရားဝင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး လိဒ် ယူနိုက်တက် ၀တ်စုံဝတ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ တိုဘီရဲ့ ပုံရိပ်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
လိဒ်ယိူိုံက်တက်အသင်း ရဲႚ အမာခံပရိသတ်တစ်ဦူးဖစ်တဲ့ တိုဘီိုံင်း ဆိုတဲ့ အသက် (၆)ိံစ်ြအရယြ် ကလေးငယ်ကတော့ ကင်ဆာဝေဒနာေုကာင့် ကယ်ြလန်ြသြားခဲ့္ဘပီူဖစ်လိုႛ စပၝးအသင်းကသူႛအတကြ် အမတ်ြတရူဖစ်စေတဲ့ အေုကာင်းအရာတေကြို ဖော်ူပပေးခဲ့ပၝတယ်။
တိုဘီဟာ ကင်ဆာဝေဒနာကို (၂)ိံစ်ြခြဲုကာခံစားခဲ့ရ္ဘပီး သူကယ်ြလန်ြခဲ့ရတာကလည်း ဒီ brain tumour ဝေဒနာေုကာင့်ပဲလိုႛ တိုဘီရဲႚ မိသားစုက ဖော်ူပခဲ့ပၝတယ်။ဇန်နဝၝရီလ (၁၃) ရက်နေႛ တနဂဿေိံနြေႛ ညနေမြာ ကယ်ြလန်ြသြားခဲ့တဲ့ တိုဘီရဲႚ အေုကာင်းကို သူႛမိသားစုက တစ်ြတာအကောင့်မြာဖော်ူပခဲ့္ဘပီး သူရဲႚကောင်းကတော့ မေမေ နဲႛ ဖေဖေ ရဲႚ လက်မောင်းပေၞမြာ လဲလေဵာင်းရင်းထက်ြခြာသြားခဲ့္ဘပီလိုႛရေးသားဖော်ူပခဲ့ပၝတယ်။
အခုလို တိုဘီကယ်ြလန်ြသြားခဲ့တဲ့ သတင်ုးကာုးကားခဵင်းမြာပဲ လိဒ်ယိူုိံက်တက်အသင်းရဲႚ ပိုင်ရငြ်ူဖစ်သူ အန်ဒရီယာ ရက်ဒ်ဒရီဇက်နီက သူႛရဲႚ တစ်ြတာမြာ ミ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာသြားပၝတော့ အိန်ဂဵယ်လေး တိုဘီရေ Elland Road မြာအတူရြိခဲ့တဲ့ ပေဵာ်ရင်ြစရာအမတ်ြတရတေကြိုံလြုံးသားထဲမြာ အူမဲအမတ်ြတရရြိနေမြာပၝ။ငၝတိုႛမင်းကိုခဵစ်ပၝတယ်။မင်းနဲႛစိတ်ဓၝတ်ုကံ့ခိုင်တဲ့ မိသားစုကိုလည်း ဆုတောင်းပေးပၝတယ်ミလိုႛ ခဵက်ူခင်းပဲရေးသားဖော်ူပခဲ့သလို ကလပ်အသင်းအနေနဲႛလည်း ミိံလြုံးသားတြေ ကြဲေုကရပၝတယ်။ပေဵာ်ရင်ြခဲ့တဲ့အခိုက်အတန်ႛတေကြ မေ့မရိုံင်တဲ့ အမတ်ြတရတေအြူဖစ်ရြိနေမြာပၝ။ငၝတိုႛမင်းကိုခဵစ်ပၝတယ် တိုဘီミလိုႛ တရားဝင်ရေးသားဖော်ူပခဲ့္ဘပီး လိဒ် ယိူိုံက်တက် ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ တိုဘီရဲႚ ပုံရိပ်ကိုလည်း ဖော်ူပခဲ့ပၝတယ်။
Home Football Premier League အသက် (၆) နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ် ကလေးငယ်အတွက် အမှတ်တရ စကားဆိုခဲ့တဲ့ လိဒ်ယူနိုက်တက်